परनिर्भर बन्दै कर्णाली : गरिबी दर ५१ प्रतिशत, अन्य प्रदेशको गरिबी दर कति ? || समाचार
परनिर्भर बन्दै कर्णाली : गरिबी दर ५१ प्र...
परनिर्भर बन्दै कर्णाली : गरिबी दर ५१ प्रतिशत, अन्य प्रदेशको गरिबी दर कति ?
काठमाडौं । उत्पादन तथा आर्थिक विकासका सम्भावना कर्णालीमा प्रयाप्त छन् । यहाँका पाखा बारीमा पनि लगानी गर्न सके सुन फलाउन सकिने उर्वर भुमि छ । कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यापार व्यवसायमै लागेर पनि जीवन निर्वाह सक्ने सामथ्र्य कर्णालीमा छ । तर विडम्बना, राज्यले लगानी गर्ने कन्जुसाई गर्ने, यूवा जनशक्ति आफ्नो ठाउँमा भविष्य नदेख्ने प्रबृतिकै कारण कर्णाली झनै परनिर्भर बन्दै गएको देखिन्छ । कर्णालीका वर्षेनी करिब २५ हजार बढी मेट्रिक टन खाद्यन्न आयातमै निर्भर छ । तर यहाँका खेती योग्य जमिन बाझा छन् ।
नेपालमा जीवनस्तर सर्वेक्षणले पनि खर्च गर्न सक्ने क्षमतालाई गरिबी मापनको मुख्य आधार बनाइने र त्यसका आधारमा कर्णालीमा बहुआयामिक दर पनि बढेको राष्ट्रिय तथ्यांक विभागका सूचना अधिकारी तीर्थराज चौलागाईंले जानकारी दिनुभयो ।